Health – Shwe Likes
ဆီးချိုရောဂါ ခံစားနေရသူများ ပျားရည် သောက်သုံးရပါ သလား….( ဆီးချို နဲ့ ပျားရည် )
By W KPosted on September 13, 2019
ပျားရည်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ သဘာဝအားဆေး ၊ဆေးဖက်ဝင် အစားအစာဆိုပြီး ဦးနှောက်ထဲ အရင်ပေါ်လာတယ်ဟုတ် ။ ကလေးကစလို့ လူကြီးတွေအထိ အကုန်လုံး စားလို့ရတယ် ၊ လို့တော်တေ်ာများများက မှတ်ယူထားကြတာပါ ။ ဒါဆိုရင် ပျားရည်က ဆေးဖက်ဝင် အစားအစာတစ်ရပ်အနေနဲ့ >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ကင်ဆာဆဲများသေစေပြီး ကျောက်ကပ်လိုရောဂါဆိုးများ သာမက ခန္ဓာကိုယ်ထဲ မှ အဆိပ်တွေ ကို ဖယ်ရှားပေးမည့် 👉 ကဒက်ဥ 👈
By W KPosted on September 9, 2019
ကင်ဆာဆဲများသေစေပြီး ကျောက်ကပ်လိုရောဂါဆိုးများ သာမက ခန္ဓာကိုယ်ထဲ မှ အဆိပ်တွေ ကို ဖယ်ရှားပေးမည့် ” ကဒက်ဥ ” ၁။ Energy ကိုမြှင့်​တင်​​ပေးခြင်း ၂။ ပင်​ပန်းနွမ်းနယ်​မှုကို​ပျောက်​​စေခြင်း ၃။ ရင်​ကျပ်​ပန်းနာကိုသက်​သာ​စေခြင်း ၄။ ချောင်း​ခြောက်​ဆိုးခြင်းကို​ပျောက်​​စေခြင်း >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
By ShwePosted on September 6, 2019
လူပိန်ချင်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ဗိုက်ခေါက် အဆီ၊ ခါးဆီ၊ ကျောဆီလို အဆီပိုတွေပဲ ကျချင်တယ်ဆိုသူများ အတွက် ဆေးနည်းကောင်းလေး အချိန်မကုန် လွယ်ကူ သက်သာတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပေမယ့် နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ တော့ ဇွဲရှိရှိ လုပ်ရပါမယ် ပါဝင်ပစ္စည်းများကတော့ သံပုရာသီး >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ခွဲစိပ်စရာ မလိုတဲ့ နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းရောဂါ
” ခွဲစိတ် ရင် (၁၀) သိန်း အထက် ကုန်ကျနိုင်မယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြား မှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားတဲ့ ဆေးနည်း “ နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းပြီး အသက်ရှူုမဝ၍ ဆရာဝန်နှင့်ပြ ၊ဆေးများသောက်သော်လည်း >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
အာပုပ်ဆော် နံတာ၊ သွားမှာ ကျောက်တည်တာ နဲ့ သွားချိုး (ဂျိုး) တက်တာတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝသွားတိုက်ဆေး
သွား နဲ့ ခံတွင်း ကျန်းမာရေးက သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ စကားပြောဆို ဆက်သွယ်ရမှာ ခံတွင်းနံ့ မဆိုးဖို့လိုသလို အပြုံးချင်းဖလှယ်ရာမှာ ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအတွက် ဘယ်လို သွားတိုက်ဆေးတွေ ၀ယ်ယူ အသုံးပြုရမလဲလို့ တွေးနေပြီလား။ အဲဒီလို ကုန်ပစ္စည်းတွေ >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
” မင်းဂွတ်သီးပေါင်း နှင့် ကင်ဆာ ” ( ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာရှင်များအတွက် ဆေးတစ်လက် )
By W KPosted on September 1, 2019
” မင်းဂွတ်သီးပေါင်း နှင့် ကင်ဆာ ” ရေဖြင့်စင်ကြယ်စွာဆေးကြောထားသော မင်းဂွတ်သီးများကို ပေါင်းအိုးဖြင့် မိနစ်၂၀ခန့်ပေါင်းပေးပါ ။ ထိုပေါင်းထားသောမင်းဂွတ်သီးအသားကို ကင်ဆာဝေဒနာရှင်များနှင့် hivဝေဒနာရှင်များ တနေ့တလုံးစားပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းမွန်စေ၍ ကင်ဆာဆဲလ်နှင့်ရောဂါပိုးကိုတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိပါသည် ကျန်သည်အလုံးများကို အအေးခန်းခန်းထဲထည့်သိမ်း၍ စားနိုင်ပါသည် ။ >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ကြောက်စရာ ကောင်းလှတဲ့ ဆေးဘဲဥ ထဲ က အဆိပ်
By W KPosted on August 26, 2019
ဆေးဘဲဥ ကြိုက်သူများ မဖြစ်မနေ ဖတ်သွားပါ … ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အသိ ကိုယ်တိုင်လည်း သိလိုက်ရပြီ 😱 ဆေးဘဲဥ (century egg)ကိုစားသင့်သလား ??? ဆေးဘဲဥကို century egg,preserved egg,hundred year egg, >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဝမ်းနှင့် ပတ်​သက်​​သော ​ရောဂါများ အတွက်​ အိမ်​တိုင်း ​ဆောင်​ရန်​​ဆေးတစ်​လက်
By W KPosted on August 23, 2019
ဝမ်းနှင့် ပတ်​သက်​​သော ​ရောဂါများ အတွက်​ အိမ်​တိုင်း ​ဆောင်​ရန်​​ဆေးတစ်​လက် ဝမ်းနှင့်​ ပတ်​သတ်​ လျှင်​ ဝမ်းချုပ်​ခြင်း အ​ကြောင်း အရင် ​သိရ ပါမယ် ​။ ဝမ်းချုပ်​ခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ?… ဝမ်းချုပ်ခြင်းဆိုတာ​​​​လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
အဆိပ် အမျိုးမျိုးနှင့် ရောဂါ ( ၁၈ ) ပါး ကို ပျောက်ကင်း နိုင်သော ကြောင်လျှာသီး /ကြောင်လျှာရွက် / ကြောင်လျှာပွင့်
By W KPosted on August 22, 2019
အဆိပ် အမျိုးမျိုးနှင့် ရောဂါ ( ၁၈ ) ပါး ကို ပျောက်ကင်း နိုင်သော ကြောင်လျှာသီး /ကြောင်လျှာရွက် / ကြောင်လျှာပွင့် ကြောင်လျှာပင် ( Indian Trumpet Flower , >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်